I-Laboratory Clay Ceramic Fire Assay Crucible isetshenziswa kakhulu ekuhlaziyeni amasampula ensimbi namasampula ancibilikayo kumagumbi okucwaninga, amalabhorethri amaminerali kanye namalabhorethri ahlukahlukene ezimboni.
I-Clay Crucible---Assay Crucible
Isetshenziswa kakhulu ekuhlaziyeni amasampula ensimbi kanye namasampula ancibilikayo kumalabhorethri, amalabhorethri amaminerali kanye namalabhorethri ahlukahlukene ezimboni. Amasampula kanye nezithako zifakwa ku-crucible, futhi ukuhlolwa kokuncibilika kwenziwa ekushiseni okuphezulu. Inkinobho yokuhola etholwe yimvula ewuketshezi ibe ingaphansi kokuhlolwa okulandelayo;
Ukusebenzisa izinto ezisezingeni eliphezulu, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuguquguquka okuhle kokushisa, ukuhlanzeka okuncibilika okuphezulu, ukumelana nokugqwala okuqinile nempilo ende yesevisi.
Izici: I-refractoriness ephezulu, ayikho i-slag, akukho ukungena, akukho ukuqhekeka, iyisisetshenziswa sesigaba sokuqala sokuhlola umlilo.
Anelisekile ngokunikeza isibhamu esisodwa esilahlwayo, izihluthulelo zokuhlola umlilo zinedumela elifanelwe ukudutshulwa kaningi. Lesi sici sinikeza amakhasimende ethu izinzuzo ezibalulekile zokunciphisa izindleko ngokudubula ngakunye kanye nokukhulisa inzuzo.
Ukukhiqiza ngobuchwepheshe bakamuva obuzenzakalelayo kunikeza ukufana okuqinisekisiwe kosayizi okubalulekile ngamasistimu wokuthela okuningi kanye nemigqa ezenzakalelayo. Phakathi naleso sikhathi, izinto zokusetshenziswa ezikhethwe ngokucophelela kanye nokwakheka okunengqondo okwengeziwe nge-soda ephansi ye-caustic, okuqukethwe kwe-iron okuphansi nokuqukethwe kwe-silicon ephezulu kwenza ama-crucibles aqinisekise ukumelana nezinga lokushisa elifinyelela ku-1500 ° C.
Osayizi namasevisi angokwezifiso ayatholakala.
Into: I-Lab Ceramic crucible
Uhlobo Lwenqubo: Ukugoqa ukubumba
Okubalulekile: SiO2 + Al2O3
Indawo: Imishini yokubumba ezenzakalelayo
Ukuthumela: noma yiziphi izitoko , isikhathi sokulethwa cishe ngezinsuku ezingu-5-10. ngolwandle noma ngomoya njengesicelo sekhasimende
Ukulethwa& Isevisi: Ukulethwa ngesikhathi isikhathi ngasinye. Nikeza isevisi ethembekile futhi unesibopho sekhasimende ngalinye ngomkhiqizo ngamunye. Umgomo wethu uwukwanelisa wonke amakhasimende ngesevisi engcono kakhulu.
i-lab ceramic crucible